Iziqalo eziMkhulu kwiMatriki oPhambi kweSikolo
Ukuphuhliswa kokuqala kweengcamango zamanani kubalulekile ekuphuhliseni izimo zengqondo ezintle malunga neemathematika eziselula. Izindlela ezikhethekileyo kunye nemisebenzi iya kuncedisa abantwana ukuphuhlisa izakhono zokubala lokuqala. Ezi ndlela ziza kufuneka zibandakanye ukusetyenziswa kokukhuthaza nokubandakanya izinto eziphathekayo ezinokusetyenziswa ngabantwana. Abantwana abancinci kufuneka babe namava amaninzi baze bathi ngaphambi kokuba amanani abhaliweyo abe nengqiqo kubo.
Ngaphambi kweminyaka emibili ubudala, abantwana abaninzi baya kuguqula amagama athi "enye," "amabini," "abathathu," "abane," "ezintlanu," njl. Nangona kunjalo, baqaphela ukuba inani libhekiselele kwinto okanye isethi yezinto. Kule nqanaba, abantwana abanalo ulondolozo lwamanani okanye inombolo yenombolo.
Iimviwo ze-Pre-School kunye nendlela onokunceda ngayo umntwana wakho
Ukubandakanya abantwana ngeendlela ezahlukeneyo zokulinganisa isisiseko esihle. Ngokomzekelo, abantwana bathanda ukusixelela ukuba "bankulu" kunodade wabo okanye umzalwana okanye "umude" kunokuba isibane okanye "baphakamileyo" kunokuba i-dishwasher. Abantwana abaselula baya kucinga ukuba "baninzi" kwindebe yabo kuba nje indebe yabo iyinde. Olu hlobo lweelwimi ludinga ukukhuthazwa kwaye abantwana badinga ukhokelo lwabazali ukunceda ngeengcamango ezingalunganga zale ngcamango ngokusebenzisa uvavanyo.
Ukuba nale ngxoxo ngexesha lokuhlamba lukhetho olukhulu. Zama ukuzisa nokusebenzisa iindidi zeeplastiki, iikomityi kunye neebhotile kwibhayibhile kunye nomntwana wakho.
Kule minyaka, ingqiqo yesikhokelo somntwana, abanakho naziphi ezinye izicwangciso zokubakhokela ekunqumeni ukuba kuninzi okanye ngaphantsi, kunzima okanye kukhanya, kunkulu okanye kuncinci , njl amava ukunceda iingcinga ezingalunganga zabantwana ngokudlala.
Ukwahlula ngumbono wokuqala ngaphambi kwenombolo ukuba abantwana badinga uvavanyo oluninzi kunye noqhagamshelwano. Siza kubeka rhoqo ngaphandle kokuqwalasela oko sikwenzayo. Sibheka kwiimpawu ezi-alfabhethi okanye ukulungiswa kwamanani, sithenga ukutya kwiindawo zamaqela okutya, sizahlula ukuhlenga ukuhlamba iimpahla, sihlenga i-silverware yethu ngaphambi kokuyibeka. Abantwana banokuzuza kwimisebenzi eyahlukileyo eya kuthi ixhase iingcamango zokuqala zokubala.
I mi sebenzi
Sebenzisa iibhloko ukubandakanya abantwana abancinci ukuphinda iipatheni ..... oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza, olune-orange.
Buza abantwana abaselula ukuba bahlele i-silverware okanye i-washingroom ngokusekelwe kumbala.
Sebenzisa imilo ukukhuthaza abantwana ukuba banqume into ezayo elandelayo → kathathu, isikwere, isangqa, unxantathu, njl.
Buza abantwana ukuba bacinge ngezinto abanokubhala ngazo, bahambe, bahamba, bahamba ngeentlanzi njl
Buza abantwana ukuba zingaphi izinto ezisegumbini lokuhlala ezikwere okanye ezijikelezayo okanye ezinzima njl.
Buza ukuba bakuxelele ukuba zingaphi izinto ezenziwa ngamatye, iplastiki, isinyithi njl.
Ukwandisa imisebenzi yokwenza izigaba ukubandakanya amanqaku angaphezu kweyodwa (inzima kunye neyincinci, okanye isikwere kunye nokugqithisa njl.).
Ngaphambi kokuba abantwana babale
Abantwana badinga ukufanisa iiseti phambi kokuba baqonde ukugcinwa kwenani kwaye ukubala kubhekiselele kwiiseti zezinto.
Abantwana bakhokelwa yimibono yabo. Ngenxa yoko, umntwana unokucinga ukuba kukho izithelo zomvini ngaphezu kweelom kwi-qubu ngenxa yobungakanani bobunzima beethamo kunye neziqhamo. Uya kufuneka wenze enye imisebenzi ehambelana nomntwana kunye nabantwana abancinci ukubanceda bahlakulele ukulondolozwa kwenani. Umntwana uya kususa i-lemon enye kwaye unokuhambisa i-grapefruit. Phinda le nkqubo ukuze umntwana abone ukuba inani lezityalo lifana. Ezi zihlandlo ziya kufuneka ziphindwe ngokuphindaphindiweyo ngendlela ekhonkco eyenza umntwana ukuba asebenzise izinto kwaye asebenze kwinkqubo.
Eminye Imisebenzi ye-Pre-Number
Dweba isibalo semibutshane (ubuso) kwaye ubeke inani lamaqhosha kwamehlo. Buza umntwana ukuba kukho amehlo okwaneleyo ubuso kunye nendlela abafumana ngayo. Phinda le misebenzi emilonyeni, iinduku njl.
Thetha ngokwemigangatho engaphezulu nangaphantsi kuninzi okanye eninzi kwaye singayifumana njani.
Sebenzisa izitikiti ukwenza iipatheni kwiphepha okanye uzihlukanise ngeempawu. Hlela umqolo wenani elisetiweyo, uhlele umqolo wesibini kunye neendawo ezininzi phakathi kwezinto zokubhaliweyo, cela umntwana ukuba ngaba nenani elifanayo leempawu okanye ngaphezulu okanye ngaphantsi. Buza ukuba bangayifumana njani, kodwa musa ukubala. Qhathanisa amacwecwe ngomnye.
Hlela izinto kwi-tray (i-toothbrush, i-comb, i-spoon, njl njl.) Cela umntwana ukuba akhangele kude, ulungiselele kwakhona izinto ukuba abone ukuba bayazi ukuba inani lazo zinto lifana okanye ukuba bacinga ukuba zihlukile.
Uya kunika abantwana abancinci ukuqala kokuqala kwimathematika ukuba wenza le misebenzi yangentla ngasentla ngaphambi kokuzisa umntwana wakho kumanani . Kunzima ukufumana imisebenzi yokurhweba ukuxhasa ulwahlulo, ukulingana nomntu omnye, ukulondolozwa kwenani, ukulondolozwa okanye "ezininzi kunye / ngaphezulu kunezinye / kunye" kunye kwaye kuya kufuneka ukuba uthembele kwiimpawu zokudlala kunye nezinto zekhaya. Ezi ngcamango ziphantsi kweengcamango ezibalulekileyo zezibalo ekugqibeleni abantwana baya kubandakanyeka xa beqala isikolo.
Isicwangciso seSifundo: Uqikelelo
Isifundo seBakala lesi-7 seBanga leMatriki
Bala nge-10 Worksheets
I-Algrab Exponents kunye Namandla ama-Worksheet a-10
Umdlalo we-Rose Bowl: iiNqaku zexesha lonke
Herman Hollerith kunye neComputer Punch Cards
IWoldrow Wilson Iinkcukacha eziPhezulu